နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှ ပိဋကသုံးပုံ ရေးဖြေအောင် ဆရာေ​တ်ာတို့အား ချီးကျူးပူဇော် – Na Pann San
Na Pann San W | July 20, 2020 | Local News | No Comments
၂၀. ၇. ၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၈ နာရီ
သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာနက ကျင်းပခဲ့သော (၇၂) ကြိမ်မြောက် တိပိဋကဓရ တိပိဋကကောဝိဒ ရွေးချယ်ရေး စာမေးပွဲကြီးတွင် တိပိဋက သုံးပုံကျမ်း အစုံကို အာဂုံပြန်ဆိုခြင်း၊ ရေးသား ဖြေဆိုခြင်း ပြုတော်မူခဲ့ကြ၍
ပိဋကသုံးပုံ ရေးဖြေအောင် (၁) ပါး၊ ပိဋက နှစ်ပုံခွဲအောင် (၁) ပါး၊ ပိဋက နှစ်ပုံ ရေးဖြေအောင် (၂) ပါး၊ ပိဋကနှစ်ပုံ အာဂုံအောင် (၄) ပါး၊ ပိဋကတစ်ပုံ ရေးဖြေအောင် (၅) ပါး၊ ပိဋက တစ်ပုံ အာဂုံအောင် (၂၄) ပါး၊ ဝိနည်း ပထမပိုင်း ရေးဖြေအောင် (၉) ပါး၊ ဝိနည်း ပထမပိုင်း အာဂုံအောင် (၆၀) ပါး စုစုပေါင်း (၁၀၆) ပါး တို့အား
ချီးကျူး ပူဇော်ခြင်းကို ရန်ကုန်မြို့၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ သီရိမင်္ဂလာ ကမ္ဘာအေး ကုန်းမြေ၊ ဆဌသင်္ဂါယနာ မဟာပါသာနာ လိုဏ်ဂူ သိမ်တော်ကြီးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ တက်ရောက် ပူ​ဇော် ဆက်ကပ်ခဲ့ပါသည်။
၂၀. ၇. ၂၀၂၀ ရကျ နံနကျ ၈ နာရီ
သာသနာရေးနှငျ့ ယဉျကြေးမှု ဝနျကွီးဌာနက ကငျြးပခဲ့သော (၇၂) ကွိမျမွောကျ တိပိဋကဓရ တိပိဋကကောဝိဒ ရှေးခယျြရေး စာမေးပှဲကွီးတှငျ တိပိဋက သုံးပုံကမျြး အစုံကို အာဂုံပွနျဆိုခွငျး၊ ရေးသား ဖွဆေိုခွငျး ပွုတျောမူခဲ့ကွ၍
နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ မှ ပိဋကသုံးပုံ ရေးဖွအေောငျ ဆရာတျောတို့အား ခြီးကြူးပူဇျော
ပိဋကသုံးပုံ ရေးဖွအေောငျ (၁) ပါး၊ ပိဋက နှဈပုံခှဲအောငျ (၁) ပါး၊ ပိဋက နှဈပုံ ရေးဖွအေောငျ (၂) ပါး၊ ပိဋကနှဈပုံ အာဂုံအောငျ (၄) ပါး၊ ပိဋကတဈပုံ ရေးဖွအေောငျ (၅) ပါး၊ ပိဋက တဈပုံ အာဂုံအောငျ (၂၄) ပါး၊ ဝိနညျး ပထမပိုငျး ရေးဖွအေောငျ (၉) ပါး၊ ဝိနညျး ပထမပိုငျး အာဂုံအောငျ (၆၀) ပါး စုစုပေါငျး (၁၀၆) ပါး တို့အား
ခြီးကြူး ပူဇျောခွငျးကို ရနျကုနျမွို့၊ မရမျးကုနျးမွို့နယျ၊ သီရိမင်ျဂလာ ကမ်ဘာအေး ကုနျးမွေ၊ ဆဌသင်ျဂါယနာ မဟာပါသာနာ လိုဏျဂူ သိမျတျောကွီးတှငျ ပွုလုပျခဲ့ရာ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျမှ တကျရောကျ ပူဇျော ဆကျကပျခဲ့ပါသညျ။
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ မင်္ဂ လာ လမ်း တွင် မီးလောင် ၊ Level2အထိ ရောက်…ငြှိမ်းသတ်ဆဲ. ( ရုပ်သံ )